Umkhombandlela Ukusuka Semalt - Indlela Yokukhulula Iwebhusayithi Yakho Ngokuqeda Ukuhlaselwa
Kuningi lwe-cybercrime eqhubekayo kuwebhu. Ngenxa yalokho, abantu kudingeka bahlalewazi ngalaba bantu. Ukuze umuntu abe newebhusayithi, ukuphepha kwe-e-commerce venture kanye namakhasimende akho kusekukhoizandla. Abahlaseli bakha isisekelo sokuhlaselwa kobugebengu, amakhasi okuphanga kanye nama-hack ahlukene we-malware afana nokusebenzisa i-Trojans ekhona ku-imeyiliokunamathiselwe.
Ngokuvamile, abahlaseli bahlose amawebhusayithi ngezizathu eziningi. Bangase babe kusuka kumncintiswanenieceleni, efuna ukuletha isayithi lakho phansi. Kwezinye izimo, abaduni bangaba abantu abafuna ulwazi lomuntu siqu njengamaphasiwedi e-imeyilinoma ngisho nolwazi lwekhadi lesikweletu. Kunezinhlobo eziningi zama-hacks, eziningi zazo ezibhekene nokwenza ukuthi isisulu sihlupheke.
uJack Miller, isazi esiholela phambili Semalt ,ixoxa ngamanye amathiphu angakugcina kude nalaba baduni:
1. Sebenzisa amaphasiwedi aphephile.
Njengomqondisi wewebhusayithi, iphasiwedi yakho inendima enkulu yokuphatha ekwenzeniqiniseka ukuthi indawo yonke iphephile. Amaphasiwedi alula afana ne-12345 awavikelekile futhi angawa nesisulu sokuhlaselwa kwe-trial nokuphutha. Ngenyeizimo, akufanele usebenzise amaphasiwedi obala kakhulu. Iphasiwedi efana nosuku lokuzalwa noma igama lezinyane alivikelekile ngokwanele. Kufanele kubeisakhiwo segama eliyinkimbinkimbi, ukuhlanganisa izinhlobo ezahlukene zabalingiswa ngezitayela ezahlukene..Kufanele futhi uqinisekise ukuthi noma yiziphi ezinye izinhlangano ezisebenzisayoamawebhusayithi anephasiwedi ephephile futhi.
Ukusebenzisa ukuvikeleka kwesendlalelo sokuphepha kungasho okungcono kakhulu kuwebhusayithi yakho. Ngokwesibonelo,amawebusayithi ane-platform ye-HTTPS yokusingatha inzuzo ngaphezu kwalabo abangenayo. Ngenxa yalokho, ukuphepha kwewebhusayithi yakho kanyelokho kwamaklayenti akho kuxhomeke kakhulu ohlelweni lwakho lokubamba. Ngaphezu kwalokho, abantu abazuza ekusetshenzisweni kwalemibono baqeda ukwenza okuvikelekileamawebusayithi abaduni abaningi abakwazi ukungena.
3. Yazi kahle izikripthi.
Ukuhlabalala kuyingxenye yosuku lwethu lwezinsuku zokuphila. Abantu abaningi abachitha ezinyeisikhathi esiningi esibonakalayo ku-inthanethi ebhekene nemizamo eminingi ye-Hack. Isimo siba sibi nakakhulu kulabo abasebenzisa i-intanethi ehlukileizinqubo ezinjenge-admins kumawebhusayithi e-commerce. Abaqaphi bangaphawula iwebhusayithi bese behlisa ezinye izici zayo ezibalulekile ezifana nokusebenza.Imizamo Yakho Yokusesha Injini (SEO) ingasheshe ibe yinto ngenxa yamasheya alula, aphumelelayo. Ngenxa yalokho, ukuphepha kwakhoIwebhusayithi kanye neyokuphepha kwekhasimende lakho kusezandleni zakho njengomqondisi waleso sayithi. Ungasebenzisa amathiphu kule mihlahlandlela yokwenzai-website yakho iphephile, bullet ubufakazi ngokumelene nabaduni.